Caalamka – Page 2 – Goobjoog News
Wakaaladda wararka ee Tunisia ayaa sheegtay in la dilay 9 ka mid ah ciidamada ilaalada qaranka maanta oo Axad ah ka dib markii lagu qaaday weerar argigixiso oo ka dhacay galbeedka waddanka una dhow xaduudka...
Ra’iisulwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa booqanaya beri oo Axad ah Eritrea sida laga soo xigtay mas’uuliyiin ka tirsan xukuumadda Eritrea. Dowladda Eritrea ayaa isku diyaarisay soo dhoweynta waxaana waddooyinka Asmara lagu xardhay calamada Eritrea...
Iyada oo waddanka Turkiga uu u guuray dhaqan gelinta xukunka Madaxweynaha, hadana ra’iisulwasaaraha hadda talada haya Binali Yıldırım waxaa uu noqonayaa ra’iisulwasaarihii ugu dambeeyay oo soo mara dalkaasi. Turkiga waxaa soo maray 65 ra’iisulwasaare waxaa...
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa booqday Imaaraadka Carabta isaga oo halkaasi kula kulmay dhaxal sugaha Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Imaaraadka ayaa maamula Saldhig Milatari oo ku yaalla gudaha Eritrea waxaa uuna u...
Moscow iyo Washington ayaa ku heshiiyay in shir madaxeed loo qabto Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin kaasi oo lagu qabanayo waddan saddexaad. Hadalkan ayaa yimid ka dib markii ay kulmeen Putin...
Wafdi ka socda dalka Eritrea ayaa ka soo degay garoonka Bole Airport ee Addis Ababa. Ra’iisulwasaare Abiy Axmed ayaa uga hortagay wafdiga garoonka isagoo si diiran u soo dhoweeyay . Tallaabadaan ayaa timid ka dib...
Ugu yaraan 4 qof oo Itoobiyaan ah ayaa ku dhimatay, halka tiro kalana ay ku dhaawacmeen ka dib qarax lala eegtay dibad bax uu ka Khudbeynayay Ra’iisulwasaaraha Itoobiya ee caasimadda Adis. Abiy Axmed oo wareysi...
Wadahadalladii nabadeed ee u dhaxeeyay Madaxweynaha Koofurta Suudaan Salva Kiir iyo hogaamiyaha Fallaagada Riek Machar ee Addis Ababa ayaa ku dhamaaday heshiis la’aan, balse waxaa la filyaa inay mar kale ku kulmaan todobaadka soo socda...
Gudoomiyaha gobolka Badghis ee Afghanistan ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa Taliban ay dileen 30 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayna la wareegeen saldhigga militariga ee gobolka, kaasi oo ku yaalla galbeedka waddanka maanta oo Arbaco...
Ugu yaraan 180 qof ayaa la la’yahay ka dib markii doon dalxiis oo ay saarnaayeen ku maashootay Jasiiradda Sumatra ee cariga Indonesia, sida ay tilmaamayaan tiro koobyo ay sameysay xukuumadda. Mas’uuliyiinta Indonesia ayaa sheegay in...